How to Hack Gmail, Facebook with Backtrack5| Shwekoyantaw
Backtrack5နဲ့ phishing လုပ်မှာပါ.......။အရင်ဆုံး Backtrack5OS ရှိရပါမယ်..။ကျွန်တော်လဲ ဒီပ်ု့ကိုတင်နေ
တုန်းအချိန်မှာ စမ်းသက်တုန်းရှိပါသေးတယ်...ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ဒီ Tutorial လေး အမှာပါရင်ခွင့် လွတ်ပေး
အရင်ဆုံး backtrack terminal ကို အရင်ဖွင့်ပါ.......ပြီးရင် ifconfig လို့ရိုက်ပြီး သင့် IP ကိုအရင် Check ပါ....။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Backtrack terminal ပြန်သွားလိုက်ပါ။ပြီးရင် ...cd /pentest/exploits/set လို့ရိုက်
လိုက်ပါ....ပြီးရင် Social Engineering Toolkit (SET) ./set ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..။
option 2, “Website Attack Vectors”. ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် option4“Tabnabbing Attack Method”. ကိုရွေးပါ။
ပြီးရင်သင် Phishing လုပ်မယ့် URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ..။EG.......http://mail.google.com/ ပေါ့..Facebook ကိုလိုချင်
ရင်လည်း facebook url ထည့်လိုက်ပေါ့......။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ပထမဆုံးအဆင့်မှာသင်ရှာထားတဲ့ သင့် IP ကို google URL shortener ကိုသုံးပြီး
URL တစ်ခုယူလိုက်ပြီးရင် သင့်သငယ်ချင်းတွေဆီးကို အဲဒီ URL ကိုမေးပို့လိုက်......ကြိုက်သလိုသုံးပေါ့ဗျာ..
အောက်ကပုံက အဲဒီ URL ကိုသုံးပြီးနမူနာပြထားတာ..........။
အောက်ကပုံက ရရှိလာတဲ့ RESULT ပါ ...password ကော user name ကောဖေါ်ပြပေးမှာပါ။
မှတ်ချက် Backtrackကို ကျွန်တော်လေ့လာနေတုန်းတင်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ မပြည့်စုံတာ အမှားပါတာ
Labels: gmail, Phishing, tutorial |